Diyaarad Kenya leeyahay oo ku dhacday duleedka Kismaayo – Radio Muqdisho
Diyaaradan oo nooceedu ahaa F-5 kana mid ah diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa burburtay kaddib markii ay ka soo laabatay howlgal duqayn ah oo ay ka geysatay deegaanno ay ka taliso kooxda Al-Shabaab oo ku yaalla gobolka Jubbada Hoose.
Diyaaradda ayaa dhacday 3:15pm kaddib markii ay soo wajahday cillado farsamo iyadoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn nolal iyo geeri waxa ay ku sugan yihiin duuliyiyaashii diyaaradda dhacday.
Sarkaal ka tirsan warfaafinta KDF, David Obonyo ayaa sheegay inay diyaaraddu ku dhacday meel u dhow magaalada Kismaayo, balse ma uusan sheegin khasaaraha ka dhashay shilka,asagoo intaa ku daray in goobta ay diyaaradda ku dhacday baaritaan lagu sameyn doono.
David ayaa sheegay in howlgalka ay fulisay diyaaradda lagu burburiyay saldhig Al-Shabaab, lagu dilay tiro ka tirsan dagaalyahannada kooxda.
Dad goob-joogayaal ah ayaa sheegay in diyaaradaha miigga ee Kenya ay horraantii saaka duqayn ka geysteen meel u dhow tuulada Buuloguduud, oo 30 km dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Waxay sheegeen inay maqleen qaraxyo waa-weyn.
Bururka diyaaradan ayaa imaanaya maalmo kaddib markii kooxda Al-Shabaab ay 64 qof ku dishay magaalada Mandera labadii toddobaad ee ugu dambeeyay.